New Year Kwaziso vagadziri uye vanotengesa | Haitung
chakaita zvokugadzirwa nebwe
chakaita zvokugadzirwa Rubber
Kupfeka & Paint
New Year Kwaziso
We Haitung Chemicals Co, Ltd.. dai iwe nemhuri yako wakasimba, akapfuma itsva gore 2019!
Post nguva: Jan-01-2019
Runhare: +86 536 2746720
US VAM inoda kupfava inoenderera mberi munhandare yekutengesa kunze, ...
Iyo US vinyl acetate monomer (VAM) musika wekutengesa kunze unoramba uchitarisana nekuderera kushomeka nezvinhu zviripo zviripo, ichiwedzera kumanikidza mumwedzi yezhizha. Kazhinji, kudiwa kwemwaka kune kukwidziridzwa muQ2 yekuvaka ...
Makemikari anotarisana nekuda kushamiswa kwakafanana ne2008 se coronavirus kuenda ...
Sezvo coronavirus ichienda pasirese, makemikari misika inogona kutarisira kukatyamadzwa kudiwa kwakafanana nedambudziko remari ra2008, netarisiro yekuderera kwehupfumi muhafu yekutanga ya2020 ichiwedzera kuwedzera. MuEurope, zvakadaro ...
coronavirus kuputika kwekutengesa cheni kukanganisa kunowedzera
Kuvhiringidza keteni kukanganiswa kubva ku clampdowns pane kupararira kwecoronavirus kunokonzeresa misoro mikuru yevagadziri vemakemikari mumazuva anotevera nemavhiki. Nhau midhiya mishumo yekusadzimika kusingaperi kweimwe ye ...